साझँको समयमा मोबाईल चलाउदा धातक रोगको सिकार भैईने ! सबैको जानकारीका लागि सेयर गरौ ! - Eall Nepal
साझँको समयमा मोबाईल चलाउदा धातक रोगको सिकार भैईने ! सबैको जानकारीका लागि सेयर गरौ !
शुक्रबारको दिनमा धनकी देवी लक्ष्मीको फोटोलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७६ साल साउन १७ गते शुक्रबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।
आफुखुसी सरकारी कर्मचारी बिदेश भ्रमण जादै गर्दा, सरकारले लियो कडा एक्सन !